BUKA: 'Siyethemba ukuthi u#BlackFriday ngeke ushiye abantu becwile ezikweletini' | News24
LAST UPDATED: 2018-11-15, 10:18
BUKA: 'Siyethemba ukuthi u#BlackFriday ngeke ushiye abantu becwile ezikweletini'
Cape Town - UBlack Friday, okuwusuku olukhulu lwemititilizo, ungafaniswa "nokuphushela izingane esitolo sikaswidi ngenhloso yokubona ukuthi zizokwenzenjani".
Lokhu kuvezwe nguRoger Brown, oyisikhulu esiphezulu sakwaCredit Matters, okuyinkampani eyeluleka abantu ngezikweletu.
"Lolu suku lwenziwa ngendlela yokuthi abantu bangaziboni bengeyona ingxenye yalo, futhi kuqinisekiswe ukuthi bayiqongqotha yonke imali, ngakho thina njengabeluleki bezikweletu sikhathazekile kakhulu," esho.
OLUNYE UDABA: Bekundiza iqupha eFair Price eGoli kubangwa ezeBlack Friday
UBrown uthi ukukhathazeka kwabeluleka ngezikweletu akukhona ukuthi abantu basebenzisa imali - njengoba vele abantu beyisebenzisa zonke izinsuku imali - kepha ukusetshenziswa kwemali ngendlela engahlelekile, nokungaba nomthelela ongemuhle ngesikhathi esizayo.
"Ngicabanga ukuthi abantu kumele benze izinto bevule amehlo," kusho uBrown. "Kumele bayazi into ebalulekile. Ngenxa yokuthi into isendalini, akusho ukuthi kumele bayithenge."
UBrown unxuse abathengi ukuba baqaphele uma vele kuwukuthi sebecwile ezikweletini.